सचिवालय बैठकअघि ओली र प्रचण्ड टिमसँग छलफल गर्दै « Drishti News – Nepalese News Portal
सचिवालय बैठकअघि ओली र प्रचण्ड टिमसँग छलफल गर्दै
तीन दिनको स्थगनपछि शनिबार नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै छ । बैठकअघि दुवै अध्यक्ष रणनीति तय गर्न छलफलमा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार केपी शर्मा अ‍ोलीले बालुवाटारमा निकटहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रचण्डले पनि आफ्नो निवास खुमलटारमा निकट नेतहरुसँग राय लिएका छन् ।
‘एकताको आधार पछ्याउनका लागि तपाईंहरू (दुई अध्यक्ष)ले केही दिन बैठक रोकेर भए पनि छलफल गर्नुपर्छ, बहुमत–अल्पमतमा जाँदा समस्या आउँछ, पार्टी एकता दुर्घटनामा पर्न सक्छ, त्यसैले त्यसरी अगाडि बढ्ने कुरामा दुवै अध्यक्षले धेरैपटक सोच्नुपर्छ,’ प्रचण्ड र पोखरेलको संवाद उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘जवाफमा प्रचण्ड कमरेडले एकताको आधार सहमति हो भने सहमति गर्ने आधारबारे उहाँको प्रस्तावचाहिँ के हो त ? केमा गर्ने ? जिज्ञाशा राखेर त्यसमा पहिला ठोस कुरा आउनुप¥यो भन्ने धारणा राख्नुभएको छ ।’
तर, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार डाकिएको सचिवालय बैठक समयमै्र हुने बताए । ‘शनिबारको बैठक स्थगित हुन्न, छलफल अगाडि बढ्छ, जे निर्णय गर्छ, कमिटीले नै निर्णय गर्छ,’ श्रेष्ठले भने । प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने र उनले माफी मागेपछि मात्रै बैठकको औचित्य हुने अडान प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पनि सचिवालयमा दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव छलफलमा गइसकेका छन् । बैठकलाई टार्न ओलीको प्रयास जारी छ ।